Tsinana ny volana alahamady amin’io satria mifanitsy ny volana tsinana sy ny kintana alahamady. Raha tsiahivina, hoy ny mpikambana eo anivon’ity trano mpikarakara ity, Hasina Razafindrakoto, dia ny trano koltoraly no namorona ny atao hoe taombaovao Malagasy. Niainga avy amin’ny fomba isam-paritra izy io dia ny fidiovana. Isaky ny fararano no fidiovana satria miakatra ny vokatra ary matavy ny biby fiompy. Ny lohantaona kosa dia mikarainkona sy maina izany, raha ny fanazavana hatrany. Izay, hoy izy, no nisafidianana ny fararano hankalazana ny taombaovao Malagasy.